Archive du 20180207
Raharaha 7 febroary Fanapotehana firenena
Feno 9 taona katroka anio alarobia 07 febroary 2018 ny raharaha 07 febroary 2009, nisian’ny fananihan-dapa sy fitifirana teny Ambohitsorohitra tamin’izany fotoana.
Marc Ravalomanana Mila azy ny Malagasy
Toerana sy tanàna manodidina ny 260 izao no efa notsidihin’i Marc Ravalomanana teto Madagasikara hatramin’ny nahatafaverenany an-tanindrazana taorian’ny nanoganana azy tamin’ny taona 2009.
Fivoahan’ny praiminisitra any ivelany Fanesorana amin’ny fomba hafa kely
Io ilay nambara fa tompondaka amin’ny zavatra hafahafa sy manjavozavo ny fitondrana HVM. Nambaran’ny didim-panjakana laharana 2018-097 nivoaka ny zoma 2 febroary lasa teo mantsy fa Atoa Ramarcel Benjamina Ramanantsoa izay minisitra misahana ny tetikasan’ny filoham-pirenena,
Faritra Analamanga, Prefektiora, CUA Natomboka omaly ny fampihavanana
Nihaona manokana tao amin’ny Lapan’ny tanànan’Analakely omaly talata 6 febroary ny ben’ny tanànan’Antananarivo Lalao Ravalomanana, ireo mpikambana avy ao amin’ny filankevitry ny fampihavanana Malagasy dia ny jeneraly Charles Rabemananjara sy Razaka Oliva,
Governemanta Hanao St Valentin any Mantasoa ?
Miala any indray ny governemantan`ny fandaniana sy ny fihetsiketsehana. Hisy indray mantsy ny fanaovana tombana na Team Building hotanterahina any Mantasoa ny 13 sy 14 febroary ho avy izao ka hanao ny fandaniana mihoapampana indray ny mpitondra fanjakana ahafahana mikarakara ny hetsika.
Fifidianana 2018 Mihenjan-droa ny tady eo amin’ny Fanjakana sy ny CENI
Nifarana vonjimaika tamin`ny 31 janoary 2017 lasa teo ny fisoratana anarana tao amin’ny lisi-pifidianana, fisoratana anarana izay hahazoana ny lisitr’ireo mpifidy hiatrika ny fifidianana vinavinaina amin’ity taona 2018 ity.
Famotehana nataon-dRajoelina tamin’ny 2009 Taona maro vao ho tafarina ny firenena
07 febroary 2009 – 07 febroary 2018 : Feno 9 taona anio ny nanaovan-dRajoelina sorona olona miisa 37 sy ny nandratrany olona 200 latsaka. Raha tsiahivina kely ny tantara, rehefa avy namotika sy nandoro ny fananam-pirenena sy ny orinasa Malagasy maro ny ekipan’ny TGV ny 26 janoary dia tonga nihani-dapa ny 07 febroary 2009.
Mba menatra ry Jean 7 a !
Tena variana aho ry Jean fa ialahy isany indray ve no nitory ? Sa ve tokony ho navela hovakian’ialahy isany ny lapa feno basy sy ny tahirina volam-panjakana ?
Antananarivo Atsimondrano Tratry ny fitaka bevava ireo sefom-pokontany
Ny alarobia 31 janoary hariva no nilazana ny sefom-pokontany rehetra teny amin’ny distrikan’Antananarivo Atsimondrano dia Itaosy, Andranonahoatra, Ambavahaditokana, Tsararay, Fiombonana…
Fanatanjahantena Malagasy Ny rafi-pitantantanana no miteraka savorovoro
Tena mampisavorovoro sy mampikorontan-tsaina ny maro, na mpitantana, na mpilalao, na mpitia fanatanjahantena tsotra fotsiny izao, ny fikorontanan-dava miseho lany eo anivon’ireo rafim-pitantanana fanatanjahantena eto amintsika ka tsy mety ahitam-bahaolana mandraka ankehitriny.
Miha krizy indray
Nihazakazaka ny fahasahiranam-bahoaka tato anatin’ny fitondrana HVM, raha tsy hilaza afa-tsy ny fiakaran’ny vidim-bary avo 2 heny amin’ny teo aloha fotsiny sy ny fiakaran’ny vidin-tsolika matetika ary ny sandam-bola ho 2000% be izao nanomboka tany amin’ny fiitondran’ny filoha Tsiranana no ho nankaty.
Zotram-pitaterana suburbaine E Maro no manary olona antenantenan-dalana
Mampitaraina an’ireo mpandeha avy any amin’ny By Pass hihazo ny renivohitra fatratra ny afitsoky ny zotram-pitaterana suburbaine E fa manivana olona tsotra izao ny ankamaroan’izy ireo, tahaka an’ireo zotram-pitaterana maro any amin’ny toeran-kafa ihany koa,
Kaoperativam-pambolena Sahirana mitady lalam-barotra
Nisy ny atrikasa manokana ho an’ny sehatra miara-miasa amin’ny kaoperativa notontosaina nanomboka omaly ary hifarana anio etsy amin’ny Colbert Antaninarenina.
CISCO Antananarivo Renivohitra Tohanana manokana ireo mpianatra hiatrika CEPE sy BEPC
Hifarana ny 02 martsa ho avy izao, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny fari-piadidiam-pampianaran’Antananarivo Renivohitra Rtoa Rakotozafy Ramasy Harisoa, ny fisoratana anarana ho an’ny fanadinam-panjakana CEPE amin’ity taona 2018 ity.
Sekoly Nomerika CEG 8 no hahazo fitaovana avy amin’ny Orange Solidarité
Mitohy hatrany ny asa sosialy tanterahin’ny “Orange Solidarité” entina hanatsarana ny sehatry ny Fanabeazana eto amintsika.
Fakana an-keriny Karana Mikorapaka ny fanjakana
Miezaka mampiseho fandraisan’andraikitra ny fanjakana eo anatrehan’ny fakana an-keriny mahazo ny karana. Nibahan-toerana izany nandritra ny filankevitry ny governemanta, notarihin’ny Minisitry misahana ny tetikasan’ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana Benjamina Ramarcel Ramanantsoa, misolo tena ny praiminisitra omaly teny Mahazoarivo.
Posy sy sarety Azo atao manara-penitra tsara
Olana iray mbola saro-bahana eto amintsika ny fandaminana ny posy sy ny sarety. Matetika miteraka fitohanana sy fanelingelenana amin`ny fifamoivozana izy ireny ka mahavelon-taraina ny maro.
TRAFIKANA SOKATRA SY RONGONY
Nisy ny vaovao nivoaka omaly momba ny raharaha fahatrarana fiara “sprinter” nitondra sokatra 245 sy rongony 10 gony tsy ara-dalàna sarona tao Fianarantsoa ny alin’ny 4 febroary teo.
MALDIVES Manao antso amin’ny governemanta inde sy Etazonia ny mpanohatra ny fitondrana sy ny filoha Maldivianina teo aloha Mohamed Nasheeda mba hanampy azy ireo hanala ny filoha amin’izao Abdulla Yameen eo amin’ny fitondrana.